प्रथम नायिकाको गुनासो : ‘चलचित्रमा पत्याउनै छोडेपछि आफैंले चलचित्र बनाएँ’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रथम नायिकाको गुनासो : ‘चलचित्रमा पत्याउनै छोडेपछि आफैंले चलचित्र बनाएँ’
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो चलचित्र ‘आमा’मा नायिकाको भूमिका खेलेर नेपालकै पहिलो नायिका भएकी भूवन थापा चन्दले पछिल्लो समय चलचित्र निर्माणमासमेत हात हालेकी छिन् । तर यो नौलो कुरा भने होइन ।
अग्रज धेरै कलाकारहरु अहिले चलचित्र निर्माण गर्न थालेका छन् । कोही रहरले लागेका छन् भने कोही आफ्नै सन्तानलाई डे्ब्यू गर्न पनि चलचित्र निर्माण गर्छन् । तर भूवन भने आफैं चलचित्रमा अभिनय गर्न चलचित्र निर्माण गरेको बताउँछिन् ।
बिहीबार भूवनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘साइनो’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा बोल्दै भनिन् ‘अरुको चलचित्रमा आजकाल हामी जस्तो कलाकारले काम पाउनै छोड्यौ‌ । काम पाएपनि उनीहरुको आ–आफ्नै ग्रुप हुन्छ, यसबाट कोही पनि बाहिर आउँदैनन् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै भूवनले गुट बाहिरका कलाकारले काम पाउन छोडेको भन्दै गुनासो गरिन् । अहिले आफूलाई पनि पत्याउनै छोडेकाले चलचित्र क्षेत्रबाट पलायन नहुन चलचित्र निर्माण गरेर आफैले सानो भएपनि अभिनय गरेको बताइन् ।
उनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘साइनो’ साउन २४ गतेबाट देशभर पदर्शन हुँदैछ ।